Hong Kong ụlọ nche |	Hong Kong ụlọ nche |
Hong Kong Tower bụ a 5 ukwu oghere egwuregwu na awade nnukwu Enwee Mmeri dị iche iche bonus atụmatụ ke egwuregwu. a ohere mpere free spins cha cha egwuregwu dabeere na mara mma isiokwu nke tallest Mmaji elu niile dị Metro obodo nke Hong Kong. The backdrop nke obodo n'okpuru a nnukwu ụlọ elu nke elu ụda nke ifufe, okporo ụzọ n'okpuru na ndị uwe ojii / ụgbọ ihe mberede sirens ka zuru okè ọcha n'ihi na nke a isiokwu. E nwere jụụ nsonaazụ ụda ụfọdụ music mgbe na-esi anwụde akpa ogho. The egwuregwu na-egwuri na nzọ ego si £ 0,20 ka £ 100 na-min & max nke egwuregwu.
Nke a na-eche ohere mpere free spins cha cha game e mepụtara site elk, otu n'ime ndị ọsụ ụzọ na cha cha oghere ụlọ ọrụ na ọtụtụ na-ewu ewu egwuregwu na na-na-na-egwuri gafee ụwa. Ha egwuregwu na-kere iji oge a na-egwu ya edekọ technology na-enye ohere ọrụ na-egwu ha na ihe ọ bụla na kọmputa ma ọ bụ mobile ngwaọrụ.
Nke a dị ịtụnanya ohere mpere free spins cha cha egwuregwu na-egwuri na akara dị ka bonsai osisi, gold embellished 7, pink Lotus na a diamond. 7 na gold bụ n'elu uru na akara na 1500 ugboro gị eto na-meriri na 5 anya na-arụsi ọrụ akara. E nwere ise random Chinese dabeere na akara ahụ ndị na-ala-uru ndị. The egwuregwu logo akara, a-acha anụnụ anụnụ Yin-Yang, na a red Yin-Yang bụ atọ bonus nnọchianya nke a oghere egwuregwu.
Mystery daashi: The egwuregwu logo bụ ihe omimi na akara ma ọ na-akpọ otú ahụ n'ihi na gị mgbe ihe oyiyi ha na-ekpughe n'ime mgbe esi anwụde kwụsị ịtụ. Multiple nọmba nke ndị a na akara pụrụ ikpughe a elu-uru na akara na-enye nnukwu enweta ma ọ bụ n'ime a-acha anụnụ anụnụ Yin-Yang bonus na ike igbape jackpot n'akụkụ egwuregwu na nnukwu stakes maka ewere.
Gbasaanụ daashi: The red Yin-Yang bụ ikposa nnọchianya nke a ohere mpere free spins cha cha egwuregwu na atọ ma ọ bụ karịa landings nke a ga-ịkpalite bonus game ntinye. Anọ ma ọ bụ ise landings ga-enye gị otu ma ọ bụ abụọ extra ndụ na-eji n'oge na jackpot gburugburu na-enye gị ohere gụkwuo onwe gị na-esonụ na-etoju.
Ego Sky Wheels: E nwere atọ wheel n'elu ụlọ elu, ọ bụla na ọkwa dị iche iche nke stakes na-ndibọhọ. The-acha anụnụ anụnụ udo wheel awade stakes si 200 ka 2000, akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ wheel-enye 500 ka 10,000 na ndị ikpeazụ red wheel awade nnukwu stakes nke 2000 kacha nta ka 50,000.
Summary: Nke a dị ịtụnanya ohere mpere free spins cha cha game abịa na nnukwu emeri stakes nwere ike ime ka ị na-ntabi nde ma ọ bụrụ na ị na-emeri na max nzọ ego nke £ 100.